Tongasoa eto amin'ny fivarotana an-tserasera!
Toby fitehirizana rano
Tank fiompiana trondro
Dobo rano zaridaina
Ahoana ny fametrahanao oksizenina ny fitoeran-trondro?
nataon'ny admin tamin'ny 21-11-27
Ahoana ny fametrahanao oksizenina ny fitoeran-trondro? Misy fomba maro ahafahana manome oksizenina ny fitoeran-trondro. Ny fomba tsotra indrindra dia ny fampiasana paompy rivotra raha tsy mampiasa azy ianao. Raha sendra misy hamehana dia azonao atao ireto zavatra manaraka ireto mba hampitomboana ny oksizenina ao amin'ny fitoeran-trondro: 1. Araraka amin'ny haavo sasany ny ranon'ny akquarium amin'ny ...
FRP (Plastic Reinforced Fibre) ampiasaina amin'ny fambolena dobo trondro
nataon'ny admin tamin'ny 21-11-16
FRP (Fibre Reinforced Plastics) Tombontsoa 1. Ny lanjany maivana sy ny tanjaka avo Ny hakitroky ny havany dia eo anelanelan'ny 1.5 sy 2.0, izay 1/4 hatramin'ny 1/5 amin'ny vy karbônina ihany, fa ny tanjaky ny tensile dia akaiky na avo kokoa noho ny ny vy karbaona, ary ny tanjaky manokana dia azo ampitahaina amin'ny ...
Fiompiana trondro sy zaridaina anana
Ny fepetra famolavolana ho an'ny The Fish Farm dia nitaky azy io ho modular (mitovitovy endrika, miverimberina), azo hidiana, azo entina, takatry ny vola ary mahazo tombony. Ny vahaolana tena tsotra dia ny fananganana andian-trondro, paompy ary sivana ka mamadika ireo tanky ho toeram-piompiana trondro madinika. Fanjifana rano...
Karazan-trondro samihafa ho an'ny fiompiana trondro amin'ny fiompiana trondro
Ny fiompiana trondro dia ny fahazoana sy fiompiana karazana trondro ho an'ny tena manokana na ho an'ny varotra. Raha tianao ny tsiron'ny hazan-dranomasina ary mieritreritra ny hanorina toeram-piompiana trondro ho anao manokana ianao, dia ireto misy toro-hevitra momba ny fomba fanamboarana dobo trondro azonao resahina. Amin'ity lahatsoratra ity, ...
VAOVAO ARRIVAL Ampidiro ny harona rano andrana
nataon'ny admin tamin'ny 21-09-20
Fampidirana Ny kitapon-drano andrana entana dia natao ho an'ny fitiliana enta-mavesatra ho an'ny fitaovana sy rafitra izay mangataka lanja fitsapana enta-mavesatra rehefa vao vita, na fisavana na fikojakojana tsindraindray. Toy ny fitiliana enta-mavesatra crane, fitiliana enta-mavesatra beam, fitiliana entana rano davit, derri...
Fahombiazana sy toetran'ny kitapo ranon-javatra apetaka amin'ny fiara
nataon'ny admin tamin'ny 21-08-04
Ny kitapo ranon-javatra misy fiara ampiasaina amin'ny kamiao fiambenana fisaka sy kamiao mavesatra dia azo amboarina araka ny takian'ny mpanjifa sy ny haben'ny kamiao. Ny flexitank apetraka amin'ny fiara dia tsy mila kaontenera ho rindrina fiarovana ho an'ny fitaterana an-tanàn-dehibe an-trano, izay mampihena ny vidin'ny fitaterana ...
Shanghai International Watersports Exhibition 2021
nataon'ny admin tamin'ny 21-04-02
Shanghai International Watersports Exhibition 2021 dia natao tao amin'ny Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center tamin'ny 1 ka hatramin'ny 3 aprily, ary niara-niasa tamin'ny Asian Boat Show. Nanao sonia fifanarahana tamin’ny mpikarakara ny famatsiana dobo ho an’ny fampirantiana. Napetraka ny dobon-drano vy misy anay...
Dobo filomanosana Ambony Ground Steel Frame
nataon'ny admin tamin'ny 21-01-26
Mandritra ny fiampitana antoandro amin'ny fahavaratra dia mila mandany fotoana kely ao anaty dobo filomanosana ianao. Ny tokotaninay sasany dia manana dobo filomanosana ivelany ho an'ny olon-dehibe sy ny ankizy: izany no fiainana mety indrindra raha miala voly amin'ny andro mafana. Ankafizo ny faran'ny herinandro milamina sy miala sasatra, miala voly ao anaty dobo miaraka amin'ny zanakao, mamaky...
Ny tanky fiompiana trondro boribory dia manana anjara toerana lehibe amin'ny rafitra RAS
nataon'ny admin tamin'ny 20-11-19
Miaraka amin'ny fanatsarana ny fari-piainana, mitombo ny fangatahana trondro sy hazan-dranomasina hafa, izay niteraka fanjonoana tafahoatra amin'ny jono an-tanety. Hatramin'ny taona 2016 dia maherin'ny 50% ny hazan-dranomasina novokarin'ny fambolena. Noho izany, nipoitra ny fambolena akvarium avo lenta sy mora vidy, dobo trondro...
Toby fitehirizana solika vonjimaika ho an'ny harena ankibon'ny tany sy ny fambolena
nataon'ny admin tamin'ny 20-09-08
Ny tanky fitehirizana solika azo harodana dia fomba mahomby hitehirizana ranon-javatra betsaka ao amin'ny toeram-piompiana solika na toerana fitehirizana lehibe. Naterina mihodinkodina ary mora apetraka, ny fiara mifono vy azo ampiasaina dia safidy tsara ho an'ny fitahirizana solika vonjimaika d...
Toby fitehirizana ondana flexible
nataon'ny admin tamin'ny 20-07-21
Matetika fantatra amin'ny anarana hoe pillow bladder na lay-flat style tank, ireo kitapo ireo dia mijanona ho fomba ara-toekarena sy malaza foana amin'ny fitahirizana na fitaterana rano azo sotroina sy orana, na gazoala sy solika. Mora miforitra ary somary maivana, azo entina any amin'ny toerana mitoka-monina foana, na feno rehefa config...
Tank fiompiana trondro PVC tsy misy poizina
Fiompiana trondro PVC ho an'ny fiompiana trondro fiompiana trondro, kolontsaina vonjimaika, fampirantiana trondro fitaterana trondro, famolavolana miforitra miaraka amin'ny fanohanana sodina PVC. Izahay dia mamatsy Intensive Recirculating Aquaculture Systems (RAS) . Afaka mamokatra trondro be dia be amin’ny toerana kely izy io, mampihena ny fampiasana ny tany ho an’ny trondro...
Misoratra anarana amin'ny gazetinay mba ho tonga hatrany amin'ny fampiroboroboana, fihenam-bidy, varotra ary tolotra manokana
Mangataka teny iray
Aquaculture – mitombo…
Adiresy: Atsinanana 380m avy amin'ny sampanan-dalana Shuangfeng sy Wenhua Road, Xing'an District, Anqiu City, Weifang City, Shandong, Sina
Alatsinainy – Zoma: 10 ora maraina – 7 ora alina